STAR Tour "La destination familiale" : Tanteraka ny fanambin'ny Kaominina renivohitr'i Mahajanga
lundi, 21 août 2017 22:25
Voatana ny fanamby napetraka tamin'ny fiaraha-miasan'ny orinasa Star sy ny Kaominina renivohitra Mahajanga nandritra ny hetsika Star Tour, "La destination familiale". Anisan'ny fifanaraham-piaraha-miasa napetraka ny nanovana tanteraka ny hetsika THB Tour ho Star Tour.
Nilanona tanteraka ny mponina sy ireo mpiala sasatra taty an-toerana nandritra ny telo andro tsy ankiato nanaovana ny hetsika. Ankoatra ny fampisehoana goavana niarahana tamin'ireo mpanakanto malagasy kalaza, nisy ireo hetsika fanentanana sy lalao isan-karazany teny amin'ny Bord de la mer sy teny amin'ny tora-pasiky ny Grand Pavois.
Niavaka ny diabe sy ny zumba goavana teny amin'ny Bord de la mer ny sabotsy tolakandro teo. Tena nahasarika ny maro ny Star Tour andiany voalohany, voahaja ny fahadiovana satria isa-maraina misy hatrany ny fanadiovana sy fanasana ny Bord de la mer niarahana tamin'ny sampana mpamonjy voina an'ny Kaominina.
Nanamafy ny Ben'ny tananan' i Mahajanga, Andriantomanga Mokhtar Salim fa tratra ny tanjona dia ny fanabeazana tao anatin'ny fampialana voly ny mponina sy fanomezana fahafaham-po ireo mpitsidika an'i Mahajanga.
viamedic.com walmart cialis prices without insurance
[url=http://geo.aster.net/members/mealtuna27/activity/228060]buy cialis online uk[/url]
mardi, 12 décembre 2017 10:59
how cialis works cialis in canada
[url=http://www.urgolfpro.com/members/unitbench07/activity/591587/]average cost of cialis[/url]
mardi, 12 décembre 2017 03:28
www cialis com cialis coupons
lundi, 11 décembre 2017 22:46
jeudi, 07 décembre 2017 08:21
best priced car insurance progressive car insurance policy
[url=http://autocarins2018.com/car-insurance-for-bad-drivers/]cheap auto insurance in south carolina[/url]
mercredi, 06 décembre 2017 15:18
dimanche, 03 décembre 2017 22:39
[url=http://carinsuranceflo.com/]nationwide auto insurance[/url]
mercredi, 29 novembre 2017 02:51
[url=http://carinsuranceflorida1.com/]hartford auto insurance quote[/url]
vendredi, 24 novembre 2017 21:50